Shiinaha warshad mashiinka maqaarka faakiyuum iyo alaab-qeybiyeyaal. Boya
MAKIINADDA MAQAALKA MAQAALKA MAQAARKA Boya ayaa leh faa'iidooyinka baaxadda ballaaran ee isticmaalka. Aflaanta iswaafajisa waa filimka PE ama filimka PE / EVOH / PE .Waa nooc nooc oo baakado ah oo leh faa iidada muuqaalka kore ee badeecada aad xirxirto .Waxay ku habboon tahay wax soo saarka cuntada jilicsan ama haddii aadan u baahnayn carqalad ayaa isticmaali kara filimka PE waxay kaloo ilaalin kartaa badeecadaada inta lagu guda jiro gaadiidka.
Baakadaha noocan ahi way ku kala duwan yihiin mashiinka baakidhka faakuumka caadiga ah Mashiinka wax lagu duubo ee faakiyuuga ah ayaa ku habboon bacaha laakiin mashiinka baakidhka faakuumka maqaarka ah ayaa loo isticmaalaa filimada .Mashiinkaani wuxuu xawaareyn karaa filimka maqaarka ee 2 qolka faakuumka ah wuxuuna isticmaali karaa 2 cadaadis oo kala duwan ah laba qol si loo gaaro saameynta maqaarka, ka dhigo filimku inuu u ekaado sheyga si adag.
●Baaxadda qolka faakiyuumka: 700x500x135mm
●Awood koronto: 380V / 50HZ 4KW
●Miisaanka Mashiinka: 280kg
Mashiinkayaga maqaarka mashiinka baakidhka lagu qaato ayaa loo isticmaalaa walxaha birta ah waana mid si xor ah u taagan kuwaas oo si ku habboon ugu habboon in loo soo raro noocyo badan oo alaab ah. Heerka sare ee tayada tolidda shaabadu waxay hubisaa in la helo badhamada ugu badan ee amniga. Waad ku mahadsan tahay jirkooda wareega iyo naqshad isku dhafan, mashiinada ayaa awood u leh in meel kasta laga isticmaali karo, si goobtooda dhaqso loogu badali karo. Waa wax ku habboon oo si fudud loo isticmaali karo.
Miyaan ku dhejin karaa astaanteyda 'machcine'?
Haa, waanu kuu habeyn karnaa daabacaad adiga.
Miyaad sheegaysaa mashiinka?
Waxaan kuu habeyn karnaa mashiin, laakiin MOQ.
Hore: mashiinka qolka faakiyuumka
Xiga: Filimka cusion air